Maynooth no hany oniversite ao Irlandy ary ivon'ny fampianarana sy ny fikarohana. Io dia nosoratan'i Maynooth Castle tao amin'ny faran'ny tanàna iray, ary ny tranon'ny Carton tamin'ny taonjato faha-17 teo an-daniny - samy seza taloha an'ny Dukes of Leinster. Ny tanàna ankehitriny dia tanàna mpandehandeha sy mpianatra mavitrika miaraka amina fitsangantsanganana, kafe, fisakafoanana ary zavatra hafa tokony hatao. Maynooth dia toerana fijanonana lehibe teo amin'ny Royal Canal ho an'ny sambo alohan'ny nanamboarana ny lalamby tamin'ny 1847. Ny Royal Canal Greenway, 130km ny lalan-tongotra sy ny lalan'ny bisikileta dia azo aleha avy any Maynooth ary io no fomba tonga lafatra mankany Kilcock, lakandrano tanàna sisiny ary avy eo mandroso mankany amin'ny tanànan'ny Moyvalley mbola tsy simba.
Top fahitana any Maynooth
Kianja Golf tsara indrindra an'i Kildare
Zavatra lehibe folo hatao manodidina an'i Maynooth
Trano lehibe sy fotoan-tsarotra
Jereo bebe kokoa ao Maynooth
Adventure sy hetsikaGolf
Lova sy tantaraMandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra
Lova sy tantaraZavatra maimaim-poana hatao
Lova sy tantaraFianakaviana ankohonany
trano fisotroana kafeNy fisakafoanana ivelany
trano fisotroana kafeSakafo mahazatra